Wararkii ugu dambeeyay ee Fatahaada Wabiga Shabeelle ee deegaano ka tirsan Sh/Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Cabsi weyn ayaa soo food-saartay dadka degan deegaanada u dhaxeeya Balcad iyo Jowhar ee ku teedsan Wabiga Shabelle, kadib markii uu wabiga jabsaday, waxaana laga cabsi qabaa in fatahaada wabiga uu sababo in deegaano badan ay go’doomaan.
Biyihii ka baxay Tuulada Magaay oo ka tirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa saameeyay Tuulooyinka Kulmis Yarow, Maqdis, Jameeco Misra, Busle, Far-Baraki, Yaaqle iyo Xaaji Cali oo ah dhamaan tuulooyin ku dhow magaalada Jowhar.
Saciid Buuna oo ka mid ah Howl wadeenada Hey’adda Gift of the Givers oo ku sugan tuulooyinkaas ayaa u sheegay Jowhar.com in dalagyadii beeraha ay noqdeen kuwo baaba’ay, isla markaana dadkii deegaanka ay haatan soo wajahday qatar xoogan.
Howl wadeenada Hey’adda Gift of the Givers ayaa ka qeyb qaadanaya samata bixinta dadka ku dhaqan tuulooyinka, waxaana ay doomo ku tageen tuulooyinka, iyagoo shacabka kala qeyb qaadanayay sidii qeybta uu wabiga ka jabsaday loo xiri lahaa.
Sidoo kale Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wada dadaalo la doonayo in lagu xiro meelaha ay suurta galka tahay in wabiga ka fataho, maadaama wabigu uu aad u biyo keenay.
Maamulka ayaa deegaanada qaar geeyay kumanaan jawaano looga qeyb qaato caro-tuurka iyo in lagu celiyo jawaanada carada meelaha uu wabiga afka saaran yahay.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in daadadka ka dhashay fatahaada wabiga ay saameeyaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo maalmahan noqotay mid aad u sii xumaaday, markii roobabkii da’ay ay saameeyeen.
Tagged FATAHAAD WABIGA SHABELLE